भेनेजुयला प्रकरणमा नेपाल चुकेकै हो ?, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
भेनेजुयला प्रकरणमा नेपाल चुकेकै हो ?
यतिबेला भेनेजुएलाको आन्तरिक राजनीतिले विश्व समुदायलाई आकर्षित गरेको छ। विश्व शक्ति राष्ट्रहरु भेनेजुएलाको आन्तरिक राजनीतिकमा प्रवेश गरेपनि नेपालसँग कुनै कुटनीतिक सम्बन्ध नभएको भेनेजुएला प्रकरणले नेपालको राजनीति पनि अछुतो रहन सकेन।
आन्दोलनबाट आउँदा र आन्दोलनकारी नेतृत्वले बोल्नासाथ विधिसम्मत वा संविधान सम्मत हुने कुरा पनि भएन। संसार कुनै पनि आन्दोलन संविधान सम्मत भएर सफल भएका हुँदैनन्। संविधानका विपक्षमा उत्रिएर जनसमर्थन प्राप्त गरेर राज्य सत्तामा पुगेर वैधानिक हुने र राज्य संचालन गर्ने हो।
नेपालले कसैको हस्तक्षेप सहँदैन, विरोध वा समर्थन पनि गर्दैन। हामीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघबाट हेर्ने दृष्टिकोण पनि यही हो।
यसरी हेर्दा भेनेजुएलाको आन्दोलन त्यहाँका जनताको, राजनीतिक शक्ति वा नेताको नितान्त आन्तरिक, राजनीतिक मामिला हो। त्यसलाई संसारले हेर्ने दृष्टिकोणा आ–आफ्नै होला। एउटै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन। तर कतिपय मुलुक आ–आफ्नो शक्ति प्रदर्शनमा हुन्छन्। कतिपय मुलुकहर आ–आफ्नो समूह राष्ट्रहरुको नेतृत्वदायी भूमिकामा हुन्छन्। कतिपय मुलुकहरु प्रतिरक्षाको भूमिकामा हुन्छन्। उनीहरुका केही प्रतिक्रिया आउनु आवश्यक होला र आउन जरुरी थिएन पनि भन्न सकिएला। अर्काको आन्तरिक मामिला हो भन्ने पनि आउला।
संसारका जुनसुकै मुलुकमा आजसम्म देखिएका आन्दोलनमा बाह्य समर्थन र विरोध रहेकै हुन्छन्। हाम्रा मुलुकमा पनि २००७ सालदेखिको सबै क्रान्तिको अध्ययन गर्दा सत्तालाई समर्थन र विपक्ष आन्दोलनकारीलाई समर्थन र सहयोग रहेको देखिएकै हो।
यसरी हेर्दा अमेरिकाले भेनेजुयलका विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिने विषयलाई आवश्यक नरहेको भएपनि कसले प्रतिक्रिया दियो वा दिएन भनेर जजमेन्ट गर्ने हाम्रो मुलुकको नीति होइन।
हाम्रो पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्नको सिद्धान्त र प्रतिवद्धतामा आधारित परराष्ट्र नीति अंगाल्दै आएको मुलुक हो। नेपाल अहस्तक्षेपकारी नीति अवलम्वन गर्दै आएक मुलुकहरुको सदस्य राष्ट्र हो। कसैको हस्तक्षेप सहँदैन, विरोध वा समर्थन पनि गर्दैन। हामीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघबाट हेर्ने दृष्टिकोण पनि यही हो।
हामी शान्ति सेना पठाउने मुलुक हौं। कसैको पक्ष लिँदैनौं। हामी संयुक्त राष्ट्रसंघको झण्डा लिएर बीचमा उभिएर शान्तिकालागि आग्रह गर्छौं। कसैको पक्ष लिएर लडाइँ गर्दैनौं, कसैको जित हारमा खुशी वा विरोध गर्दैनौं ।
हाम्रा हिजोका राजा महाराजाले वा प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री वा राजनीतिक दलका नेताले पञ्चशील र असंलग्नताको सिद्धान्तलाई हामीले स्वीकार गरेका र भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक दृष्टिकोणले हाम्रो जस्तो मुलुक सहिष्णुता र भाइचाराका आधारमा असंलग्नताको सिद्धान्तको आधारमा मात्रै संचारको प्यारो र न्यायो माया, स्नेह र समर्थनमा बाँच्न सक्ने मुलुक हो।
त्यसैले शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरु सामरिक, हातहतियार, आर्थिक उन्नति, व्यापारिक सम्बन्ध आदि कारणका द्वन्द्वमा कुनै न कुनै कारणले रुमल्लिएका हुन्छन्। तर त्यस्तोमा हामी पक्ष विपक्ष हुनु हुँदैन। हामी सधैं तटस्थ बस्छौं, हाम्रो नीति तटस्थ बस्ने हो। भेनेजुएलाको सत्तामा भएको र प्रतिपक्षमा भएका नेताको समर्थन वा विरोध होइन। हामी शान्तिपूर्ण रुपमा भएका विद्रोह र लोकतान्त्रिक विधिको पक्षमा हुने कुराको समर्थन गर्छौं भन्ने कुरासम्म जायज हो।
तर, अमेरिकाले के गर्यो, के भन्यो, रुस, चीन भारतले के भने र के गरे भन्ने कुरालाई आधार मानेर विज्ञप्ति निकाल्नु नितान्त गलत हो। त्यसमा पनि सत्तारुढ दलको अध्यक्षले विज्ञप्ति निकाल्नु ठिक होइन। देश हाँकिरहेका पार्टीका अध्यक्षबाट प्रत्यक्ष रुपमा अनुभव हुने किसिमको विज्ञप्ति आउनु हुँदैनथ्यो।
अहिलेसम्म हामीले पालना गर्दै आएको वैदेशिक नीतिलाई परिवर्तन गर्ने अवस्थामा हामी छैनौं। हामी अहिलेको बाटो नै हिँड्ने हो र त्यसैलाई परिमार्जन गर्ने हो। हाम्रो असंलग्नता अथवा हामी तटस्थ राष्ट्रको रुपमा रहनु, पञ्चशील र असंलग्नताको सिद्धान्तलाई आधार मानेर अगाडि बढ्नु हाम्रो सर्वथा उत्तम मार्ग हो।
प्रचण्डले दिनु भएको वक्तव्य ठिक हो वा होइन, भ्रममा परेर बोल्नु भयो वा साँच्चै बोल्नु भयो भन्ने विषयमा विरोधाभाष पूर्ण तर्कहरु पनि आए। त्यसलाई अझै पुष्टि गर्ने गरीपार्टीका अन्य नेताहरुले बोलेको ठिक हो भन्ने अभिव्यक्ति पनि आए।
यो अभिव्यक्ति कम्युनिष्ट आदर्शको उपज पनि हुन सक्छ। यदि हो भने कांग्रेसहरुको त्यसप्रतिको प्रतिक्रिया प्रजातान्त्रिक पक्षधरको एउटा विचार हो भन्न सकिन्छ। सरकारले त्यसैमा स्पष्ट पार्ने उद्देश्यले पनि धारणा जारी गर्यो।
सार्वजनिक कार्यक्रममा राजदूतको उपस्थिति र गुनासो वा स्पष्टिकरणको कुरा पनि सार्वजनिक भएका छन्। यो सबैलाई हेर्दा एउटा परम्परागत रुपमा स्थापित मूल्य मान्यता र राष्ट्रिय सोचका आधारमा राज्य सत्ता चल्दै आएर त्यसको अर्को पाटोमा परिवर्तन भएर हिँड्ने क्रममा बाटो हिँड्दा हिँड्दै आएका अप्ठ्यारा देखिएको हो भने पनि यो प्रकरणले झन परिपक्व हुन पाठ सिकाएको छ।